Ko Apple Inokutevera Iwe Pane Yako iPhone? Hechino Chokwadi! - Iphone
sei ndisingakwanise kutarisa youtube
iphone haidi backup mu iTunes
haigone kubatana kune chitoro cheapp
Sei iphone yangu 5 ichienda yakananga kuvoicemail
Semunhu anoshandisa Apple, pane kugara uchinzwa kumashure kwepfungwa dzako kuti uri kutariswa. Unofungidzira kuti hofori yeCupertino iri kuchengeta ziso kunzvimbo yako kwese kwaunoenda. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura kuti Apple inoteedzera sei iwe uye nekukubatsira iwe kudzima maficha anogona kuteedzera nzvimbo yako pane yako iPhone!
Kana yakavhurwa, iPhone analytics inozotumira zuva nezuva rekuongorora uye rekushandisa data kuna Apple. Apple inoti inoshandisa iyi data kuvandudza zvigadzirwa nemasevhisi.
Zvinhu zvinowedzera kunakidza kana iwe ukaverenga iyo yakanaka kudhinda. Apple inotaura kuti hapana data rakatorwa 'rinokuzivisa iwe pachako', asi izvi zvinoita sezviri kutsausa.
Mundima imwe chete, Apple zvakare inotaura kuti dhata yemunhu inogona kuunganidzwa. Kana yako yega data ichiunganidzwa neiyo iPhone analytics, ichave 'inoenderana neyakachengetedza matekiniki ekuchengetedza' kana 'kubviswa kubva kune chero mishumo isati yatumirwa kuApple.'
Chii chinoitika kana masisitimu aya akabiwa kana kutadza zvachose? Dhata rako rega raizofumurwa here?
Marriott, Facebook, MyFitnessPal, uye mamwe makambani makuru akakurumidza kuputswa data ravo. Hutano kusahadzika kwechero kuunganidzwa kwedatha kunonzwisisika zvachose mune yanhasi mamiriro ekunze.
Maitiro Ekudzima iPhone Analytics
Vhura Zvirongwa uye tapira Kuvanzika . Tevere, peta nzira yese pasi uye tapota Analytics.
Iwe uchaona switch kumusoro kwechidzitiro padhuze ne Goverana iPhone Analytics . Kana switch iri green, urikutumira data rako rekuongorora uye rekushandisa kuApple. Tinya switch kuti udzime iPhone analytics!
Ongorora: Kana iwe uine Apple Watch paired neiyi iPhone, ichati Goverana iPhone & Tarisa Analytics .
Kusiya iPhone analytics yakavhurwa hakuise data rako, kunyanya rako pachako data, pane yakawanda njodzi. Nekudaro, pane zvimwe zvikonzero zviviri nei uchifanira kufunga kudzima analytics ye iPhone kudzima:
Inoshandisa maseru data kutumira mishumo kana Wi-Fi isingawanikwe. Iwe uri kunyatso kubhadhara kuti Apple itore yako yekushandisa uye diagnostics dhata kana iwe uchitumira mishumo uchishandisa maseru data.
Inogona kukonzeresa hupenyu hwebhatiri yako ye iPhone nekugara uchitumira mashandisiro uye malipoti ekuongorora kuApple. Ndosaka 'Dzima iPhone Analytics' iri imwe ye pamusoro iPhone bhatiri matipi !
ICloud Analytics inounganidza zvidiki zvemashoko pane yako iPhone, kusanganisira zvinyorwa kubva kune ako mameseji uye maemail. Izvi zvinobvumira Apple kuvandudza masevhisi akadai saSiri nekuita kuti ive nehungwaru. Semuenzaniso, unogona kugamuchira mazano akasarudzika paunenge uchibvunza Siri kwaunofanira kuwana kudya kwemanheru manheru.
Nekudaro, iCloud Analytics ndechimwe chezvishandiso zvakawanda zvinobvumidza Apple kuwana nzwisiso yekuti iwe ndiwe ani. Nomuzvarirwo, pane huwandu hukuru hwevashandisi vasina kugadzikana nazvo.
Maitiro Ekudzima iCloud Analytics
Vhura Zvirongwa uye tapira Kuvanzika -> Analytics . Wobva wadzvanya switch padhuze ne Goverana iCloud Analytics . Iwe uchaziva iCloud Analytics yakadzimwa kana switch iri grey.
wifi yekufona ngaive iri
Nzvimbo dzeSevhisi dzinoshandisa GPS, Bluetooth, Wi-Fi hotspots, uye nhare dzemasero dzepedyo kuteedzera nzvimbo yako iwe uchinge uchishandisa mamwe maapp. Nzvimbo dzeSevhisi chinhu chinobatsira kune mamwe maapplication, seGoogle Mepu uye Lyft.
Vashandisi ve iPhone vakwanisa kugadzirisa marongero avo eSevhisi Nzvimbo kwenguva yakareba. Iwe unokwanisa kuseta mvumo kune yega mapurogiramu, ayo anobatsira iwe kudzivirira mamwe maapplication kubva pakuve nekuwana kunzvimbo yako nguva dzese.
Nekudaro, iwe pamwe haudi kudzima Mahara Nzvimbo kune ese maapp. Semuenzaniso, iwe ungangoda kuchengeta Mahara Ekubatira paUber kuti mutyairi wako azive kwekukunhonga!
Maitiro Ekudzima Nzvimbo Nzvimbo Pane Mamwe Mapurogiramu
Vhura Zvirongwa uye tapira Zvekuvanzika -> Mahara Mahara . Bhura pasi pasi runyorwa rwemaapps uye uone kuti ndeapi aunoda kuwana nzvimbo yako.
Tinya pane Anwendung iwe yaunoda kudzima Nzvimbo Services ye. Tinya Hazvina kumboitika kudzima Nzvimbo Nenzvimbo dzeapp. Iwe unozoziva Hazvina kumbobvira zvasarudzwa apo bhuruu rekutarisa rinowoneka kurudyi kwayo.
Goverana Nzvimbo Yangu
Nepo Mahofisi Enzvimbo achigovana nzvimbo yako nemaapps, Govera Kwangu Nzvimbo inoita shamwari uye nhengo dzemhuri dzizive kwauri. Inoshandiswa zvakanyanya muMameseji uye Tsvaga Shamwari Dzangu maapp. Chishandiso chinobatsira kana iwe uine vana vakatsauka, vabereki vakwegura, kana chimwe chakakosha.
Ini pachangu, Govera Kwangu Nzvimbo chinhu chandisina kumbobvira ndashandisa. Ini handizive chero munhu anoishandisa. Tichifunga kuti ndiyo imwe nzira iyo Apple inogona kuteedzera nzvimbo yako, ndakafunga kuidzima pane yangu iPhone.
Maitiro Ekudzima Kugovana Kwangu Nzvimbo
Vhura Zvirongwa uye tapira Zvekuvanzika -> Mahara Mahara . Wobva wadzvanya Goverana Nzvimbo Yangu . Tinya switch iri pamusoro pekona kudzima Govera Nzvimbo Yangu. Iwe unozoziva chimiro ichi chadzimwa kana switch iri grey.
Mune maonero angu, inonyanya kuvhundutsa nzvimbo-yekutevera chinhu paPhones Nzvimbo Dzakakosha. Hakusi kungo tarisa nzvimbo yako chete, kuri kuchengetedza nzvimbo dzaunoshanyira kazhinji. Iyi inogona kunge iri imba yako, hofisi yako, kana imba yeshamwari yako yepamoyo.
Ukaenda ku Zvirongwa -> Zvekuvanzika -> Mahara Mahara -> Sisitimu masevhisi -> Anokosha Nzvimbo , iwe uchaona irinyore rondedzero yenzvimbo dzaunoenda iwe kazhinji kazhinji uye nemazuva awanga uripo. Spooky, handiti? Ini ndaive nenzvimbo dzinopfuura gumi nembiri dzakachengetedzwa pane yangu runyorwa rweNzvimbo Dzakakosha.
Apple inoti iyi data 'yakavharidzirwa' uye kuti havagone kuiverenga. Nekudaro, iwe haudi iyi data kuwira mumaoko asiri iwo, kunyangwe kana paine mukana mudiki kwazvo weizvozvo zvinomboitika.
Maitiro Ekudzima Nzvimbo Dzinokosha
Vhura Zvirongwa .
Tinya Kuvanzika .
Tinya Nzvimbo dzeNzvimbo .
Tinya System Services .
Tinya Nzvimbo Dzinokosha .
Tinya switch kumusoro kwechiso kudzima Nzvimbo Dzakakosha. Iwe uchaziva kuti yadzimwa kana switch yakamiswa kuruboshwe uye grey.
Yako yeInternet Maitiro & Akavanzika Bhurawuza
Kutarisa pawebhu pane yako iPhone kunogona kungova nengozi sezvazviri pakombuta kana komputa yedesktop. Kwete ISP yako chete inoziva kuti ndeapi masaiti iwe aunoshanyira uye kuti unovashanyira kangani, asi Google nemamwe makambani ekushambadzira anogona kuona zvaunoita uye nekuendesa kushambadza zvinoenderana nezvaunofarira.
Neraki, Apple inotora zvakavanzika zvepamhepo zvakanyanya uye yakapa nzira yekudzivirira mawebhusaiti kuunganidza data rako. Imwe nzira yaunogona kudzivirira mawebhusaiti kubva kuunganidze yako yekutsvaga nhoroondo uye imwe data ndeye kushandisa yakavanzika yekuvhura hwindo.
Mashandisiro Aungaita Chakavanzika Bhurawuza MuSafari
Vhura Safari .
Tinya iyo inopindirana yemakwere bhatani muzasi kurudyi-kona kona rekona.
Tinya Pachivande mukona yepasi-kuruboshwe kona yekona.
Tinya Zvaitwa . Iwe zvino wave kushandisa yega Safari browser!
Maitiro Ekushandisa Iyo Yakavanzika Bhurawuza MuGoogle Chrome
Vhura Chrome .
Tinya matatu akatwasuka emachira bhatani muzasi kurudyi-kona yekona.
Tinya Nyowani Incognito Tab . Iwe zvino wave kushandisa yega Google Chrome browser!
Bvunza Webhusaiti Kwete Kuti Ikuteedzere Iwe
Pane zvimwe zvakawanda zvaunogona kuita kana uchinetseka nezvekuti Apple inokuteedzera sei online. Unogona kuedza kudzivirira vechitatu-vevashambadzi nemamwe makambani kubva kukutevera paInternet nekuvhura 'Bvunza mawebhusaiti kuti arege kunditevera' mune yeApple Settings app.
Ndisati ndakuratidzira maitiro ekushandura maficha aya, zvakakosha kuti uzive kuti mawebhusaiti haana kusungirwa zviri pamutemo kupa chako chikumbiro chekuvanzika. Munguva yakapfuura, makambani akaita seGoogle neFacebook ane havana hanya zvachose zvikumbiro zvakafanana .
Kunyange zvikumbiro zvako zvingave zvisina zvibereko, ini ndinokurudzira kuvhenekera chinhu ichi. Pachinhu chidiki, iwe unodzivirira makambani akatendeseka kubva mukutevera chiitiko chako online.
Maitiro Ekutendeuka Usateedzere Zvikumbiro
Vhura Zvirongwa uye tapira Safari . Wobva wadzvanya pasi kusvika Kuvanzika & Kuchengetedzwa . Pakupedzisira, batidza switch iripedyo ne Kumbira Webhusaiti Kwete Kunditevera . Iwe uchazoziva kuti iripiko kana iri girini!
Kudzivirira Kuyambuka-Saiti Kutevera
Paunenge uri pano, ita shuwa switch iripedyo Kudzivirira Kuyambuka-Saiti Kutevera yakavhurwa. Izvi zvinobatsira kudzivirira vechitatu-bato vanopa zvemukati kubva kukutevera pane dzakawanda mawebhusaiti. Paunoshandura iyi seti, iyo data yechitatu-bato yezvinhu mupi akaunganidzwa pamusoro pako inozobviswa nguva nenguva. Nekudaro, iyo yekutevera data haigone kubviswa nguva dzose kana iwe ukashanyira uyo wechitatu-bato zvemukati mupi zvakananga.
Funga nezveavo vechitatu-bato vanopa zvemukati senge nyuchi. Kana iwe ukasazvinetsa kana kudyidzana navo, ivo havazokunetsa!
sei wont yangu iphone skrini ichitenderera
Kufukidza Matambo Ako
Iye zvino zvaunoziva zvakawanda nezvekuti Apple inoteedzera sei iwe, yako data uye ruzivo rwemunhu zvakachengeteka kupfuura nakare kose! Ita shuwa yekugovana ichi chinyorwa pasocial media kubatsira yako mhuri uye shamwari kuchengetedza zvakavanzika pane avo maPhones. Inzwa wakasununguka kusiya chero imwe pfungwa kana makomendi iwe auri pazasi.